Tang En Technology သည်ယွမ် သန်းပေါင်းများစွာ တန် သော ကောင်းကင်တမန် များ၊ - Pandaily
Jan 06, 2022, 12:12ညနေ 2022/01/07 23:56:57 Pandaily
စီးပွားဖြစ် သန့်ရှင်းရေး စက်ရုပ် လုပ်ငန်း Tang En Technology,သန်းပေါင်း များစွာသော Angel Round နှင့် Pre-A Round ရန်ပုံငွေ သည် မကြာသေးမီက ပြီးစီး ခဲ့သည်Country Garden Venture Capital သည် ဦး ဆောင် သူဖြစ်ပြီး Wavefront Venture Capital သည် ပူးတွဲ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကိုပေးသည်။ ဤ ရန်ပုံ ငွေများကို ကိုယ်ပိုင် စက်ရုံ များ ဆောက် လုပ်ခြင်း၊ ထုတ်ကုန် အသစ် များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ခြင်းနှင့် စျေးကွက် ရှာဖွေခြင်း အတွက်အသုံးပြု လိမ့်မည်။
Down En Technology သည် စီးပွားဖြစ် သန့်ရှင်းရေး စက်ရုပ် များ၏ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှု ကိုအာရုံစိုက် ရန် ၂၀၂၀ ဒီဇင်ဘာလတွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဂျာမန် သန့်ရှင်းရေး သုံး ပစ္စည်း ကုမ္ပဏီကြီး K ä rcher ၏နည်းပညာ မိတ်ဖက် ဖြစ်သည်။
လက်ရှိတွင် Tang En ၏ ထုတ်ကုန် လိုင်း တွင် အသေး စား၊ အလတ်စား နှင့် ကြီးမားသော မိုးလုံလေလုံ ကြမ်းခင်း အဝတ်လျှော် စက် များ၊။ အကောင်အထည်ဖော် သည့် မြင်ကွင်း များတွင် လူနေအိမ် အဆောက်အ ဦး များ၊ စီးပွားဖြစ် အိမ်ခြံမြေ များ၊ ဘဏ် ဆေးရုံ များ၊ လေဆိပ် ဘူတာ များ၊ စက်မှုဇုန် များ၊ ထုတ်လုပ်မှု စက်ရုံ များ၊ ရုံး အဆောက်အအုံ များ စသည်တို့ပါဝင်သည်။
မကြာသေးမီက Tang En Technology သည် K ä rcher နှင့် တွဲဖက်၍ တတိယ မျိုးဆက် AI သန့်ရှင်းရေး စက်ရုပ် KIRA BD 50/50 ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ၎င်းတွင် အာရုံခံကိရိယာ ၄၀ ကျော် ပါ ၀ င်ပြီး စက်ရုပ် သည် အမြင်အာရုံ ၊ ထိတွေ့ မှုနှင့် အတိမ်အနက် ကိုသိ ရှိနိုင်သည်။
သန့်ရှင်းရေး စက်ရုပ် ၏အမြန်နှုန်း သည်တစ် စက္ကန့် လျှင် ၁. ၂ မီတာ အထိရောက်ရှိ နိုင်ပြီး အလုပ် ၏စွမ်းဆောင်ရည် သည် စျေးကွက် ရှိ အလားတူ ထုတ်ကုန် များထက် ၂၀% မှ ၅၀% ပိုမိုမြင့်မားသည်။ ထို့အပြင် လေဆာ နှင့် ရူပါရုံ ပေါင်းစပ် တည်နေရာ နည်းပညာ ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ပိုမိုမြင့်မားသော တည်နေရာ တိကျမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု ကိုရရှိသည်။ အပြင် အဆင် အပြောင်းအလဲ များ နှင့်လူ ကူး ၀ င်ရောက်စွက်ဖက် မှုများ နှင့်ပိုမို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ကုမ္ပဏီ တည်ထောင်သူ Cui Miwei က “Tang En သည် ဉာဏ် ရည် တု နှင့် စက်ရုပ် နယ်ပယ်တွင် နက်ရှိုင်းစွာ စုဆောင်း ထားသည်။ ၎င်းသည် အသိဉာဏ် စနစ် အဖွဲ့များနှင့် အာရုံခံ အဖွဲ့ များကိုပိုမို ကောင်းမွန်စွာ ပေါင်းစည်း နိုင်ပြီး algorithms, control platform နှင့် sensors များ၏ self-research ကိုနားလည် နိုင်သည်။”
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Standard Robot သည်ယွမ် သန်းပေါင်း ရာနှင့်ချီ သော Pre-C ငွေကြေးထောက်ပံ့ မှုကို ပြီးစီး ခဲ့သည်
စီးပွားဖြစ် သန့်ရှင်းရေး ၀ န်ဆောင်မှု ဈေးကွက်တွင် နေရာ များစွာရှိသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် တရုတ် စီးပွားရေး ဝန်ဆောင်မှု စက်ရုပ် ဈေးကွက် သုတေသန အစီရင်ခံစာအရ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် စီးပွားဖြစ် သန့်ရှင်းရေး ဈေးကွက်တွင် အလုပ်သမား ကုန်ကျစရိတ် နှင့် ထိုးဖောက် မှုနှုန်းသည် ယွမ် ၅. ၈၁ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉ ၁၃ သန်း) အထိရောက် ရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၁၂၀. ၀% တိုးတက်ခဲ့သည်။ ၂၀ ၂၅ ခုနှစ်တွင် စျေးကွက် သည်ယွမ် ၇၄. ၉၁ ဘီလီယံ အထိရောက် ရှိလိမ့်မည်။